About Sharjah | Mutemo Makambani Dubai
Aichimbozivikanwa seToruzhinji States kana kuti Trucial Oman, Sharjah ndiye wechitatu mukurusa uye ane vanhu vazhinji vanobva muUAE. Sharjah, zvakare yakanyorwa se Al-Shāriqah (“wokuMabvazuva”) inonyatso kuziva nzvimbo dzayo dzakanaka uye makungwa emakungwa. Iyo ine nharaunda ye2,590 sq. Km uye inogara 3.3 muzana yenzvimbo yakazara yeUnited Arab Emirates (zvitsuwa hazvisanganisike).
kwaunoda kuenda kune varidzi vebhizinesi
Kukurumidza-kukura real estate musika
Sharjah iguta guru reEmirates yeSharjah uye inogoverana hukama hwakafanana nehwematongerwo enyika nehumwe Emirates. Inoshanyirwa nevashanyi vakawanda nekuda kwehukama hwavo mutsika.
Nemasangano akasiyana siyana edzidzo, Sharjah anovimbisa isingaperi yematarenda matsva akashongedzerwa neruzivo rwechizvino-zvino musainzi, tekinoroji, mainjiniya, nehumwe hunyanzvi hunovandudza kukura kwehupfumi. Kwenzvimbo, Sharjah iri padyo padyo neDubai uye emirate iri kufashukira nenzvimbo dzinoshamisa dzegirini.
Iyo zvakare inzvimbo iyo inokoshesa hupenyu hwekunze uye inopemberera hupenyu hunonakidza hwemagariro kune vagari uye vashanyi zvakafanana. Heano zvimwe zvinoshamisa zvinhu zvaunofanira kuziva nezve Sharjah:
Huwandu hwevanhu veSharjah hwaive zviuru zviviri muna 2,000, asi muna1950 huwandu hwevagari veUAE mune emirate yeSharjah vakafungidzirwa neFederal Kukwikwidzana uye Statistics Authority kuve 2010 (Vanhurume) uye 78,818 (Vakadzi) vachiunza iyo nhamba kune yakazara 74,547 . Sekufungidzira kweDhipatimendi reStatistics nekusimudzira Nharaunda, huwandu hwevanhu veSharjah hwaive 153,365, 1,171 mu097, uye kubvira 2012 Sharjah yakura ne2015 iyo inomiririra 409,900% pagore shanduko.
Muna 2020, huwandu hwevanhu vaSharjah hunofungidzirwa kuve pa1,684,649. Aya fungidziro yehuwandu hwevanhu uye fungidziro zvinobva mukudzokororwa kweUN World Urbanization Prospects uye fungidziro zvakare inomiririra kusangana kweMadhorobha kweSharjah kunoitika. Vanopfuura mamirioni 1.2 vanoenda kunze kwenyika vari kugara muSharjah, kune veEmeratis, huwandu hwevanhukadzi hunopfuura hwevanhurume asi nhamba yevanodzingwa vechirume yakanyanya kudarika vakadzi.
Dhipatimendi reStatistics uye Nharaunda Development inofungidzira huwandu hwevanhu veSharjah vanosanganisira vanopfuura 175,000 Emiratis. A Kuputsa pasi pehuwandu nezera reboka rinoratidza iwo makumi maviri kusvika makumi mana nerimwe seboka rakakura kupfuura vanhu zviuru mazana manomwe. Vanopfuura 20 vadzidzi venguva yakazara vari kugara muSharjah. Vanosvika makumi mana ezviuru vanhu havashandi. Vanhu vazhinji mukati meguta vanoshandira iyo yakazvimiririra, asi vangangosvika makumi manomwe neshanu vanoshandira hurumende dzemuno kana yemubatanidzwa.
ChiArab ndiyo mutauro wakakurumbira muSharjah, asi Chirungu ndiwo mumwe mutauro unotaurwa muguta rose. Zvakare, kune mimwe mitauro inotaurwa kusanganisira Hindi uye Urdu.
Ruzhinji rwevagari vanotevera chinamato cheIslam uye mararamiro evanhu muSharjah zvinoratidza kuomerera kune izvo zveIslam. Kune yakasimba mutemo yedare yakatemwa muna2001 inorambidza varume nevakadzi vasina hukama nemutemo kuti vaonekwe paruzhinji, uye inoraira yakasimba kuchengetedza kodhi yevasikana. Izvi zvimwe chete kune mitemo vashanyi zvakare.
Sharjah ndiye chete Emirate muAU iyo inorambidza kunwa nekutengesa doro neisensi. Chishanu neMugovera vakaitwa mazororo ekukudza zuva reMunamato remunamato rinova Chishanu. Nekudaro, kune mamwezve mimwe mirayiro yeakakodzera mufambiro wevanhu mukati memwedzi unoera weRamadan apo vanhu vazhinji muguta vari kutsanya.
Sharjah ane inokurumidza kukura nzvimbo yekutengesa zvivakwa. Emirate yakaona kukwira kwevanofarira mari kubva kune vese mu Middle East nekumberi kubva hurumende yafunga kutengesa zvivakwa kumarudzi ese muna 2014.
Sharjah ikozvino inzvimbo inosarudzika kwevaridzi vebhizinesi. Iyo ine zvimisikidzo zvazvino, mitemo-inoshamwaridzana mitemo uye inotsigira zvitsva uye bhizinesi. Iyi emirate ine nzvimbo yepamusoro, iyo inogara anenge zviuru makumi mana emabhizimusi madiki uye epakati anotarisana nezvivakwa, kugadzira, hutano hwehutano, dzidzo, kushanya, gasi, logistics uye akati wandei emabhizimusi masevhisi.
Kugadzira chinhu chakakosha sosi yehupfumi hwaSharjah uye inopa zvinosvika 19 muzana yeGDP yayo yegore. Yayo GDP yakasvika kwakatenderedza AED 113.89 bhiriyoni muna 2014. Emirate ine 19 maindasitiri nzvimbo dzinopa zvinopfuura makumi masere muzana muzana yeAU yakazara gross yekuburitsa kwemaindasitiri.
Sharjah ine mapaundi matatu ane nzvimbo yakazara ye49,588,000 zviuru sq km. Zvakare, ine maviri mahara emahara, iyo SAIF Zone uye Hamriyah Zone. Zvakare, Expo Center Sharjah ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekutengesa muSharjah iyo inobata dzakasiyana B2B uye B2C zviitiko.
Sharjah musha kune nhamba yakakura yemabhizinesi. Makambani akati wandei akaisa pano kubva kutanga uye mabhizinesi mazhinji akawedzera nzvimbo dzawo munharaunda ino. Kumisikidza bhizinesi muSharjah chimwe chinhu chaungada kuongorora.
Sharjah ndiro guta guru renyanzvi reUnited Emirates. Guta rinozvirumbidza nemahombekombe anoyevedza, mapaki eruzhinji, mamiziyamu, mhuka dzesango uye dzinoverengeka zvinokwezva zveArabic senge Al Majaz Waterfront, Kalba, Al Noor Mosque, Ziso reEmirates, uye zvimwe zvakawanda.
Vakakurumbira Sharjah Museum yeIslam Civilization uye iyo Museum Museum ndiyo nzvimbo hombe yekushanya yeguta uye nepo iyo Nharaunda Yenharaunda izere nezvivakwa zvinonakidza zvinoratidza nhoroondo yeEmirati.
Sharjah inzvimbo yakanaka-inoshamwaridzika yemhuri inogona kunakirwa nemhuri yese, kubva kuvana kusvika kuna vanasekuru pamwe chete. Vana vanogona kunakidzwa neyakafara nzira dzevaraidzo nepo vanhu vakuru vachigona kuwana nyaradzo mumifananidzo yemifananidzo uye zviyeuchidzo zvezvakaitika kare.
Sharjah chiratidzo chetsika, kungwara uye kuvaka kwezvakachinja muUAE.
UNESCO yakapa Sharjah zita rekuti Cultural Capital yeArabhu World muna1998, uye muna 2014 rakawana zita remusoro weGreat of Islamic Islamic. Kubva ipapo, Sharjah akachengetedza kuzvipira kwayo kutsika.
Sezvimbo yakasimbiswa yetsika, Sharjah musha kune mizhinji nzvimbo dzekutsvaga sainzi. Pamusoro pekukosha kwetsika, Old Sharjah yakawedzera kukwezva uye kukosha nekushandurwa kwedzimba dzayo nezvivakwa kuita mamiyuziyamu ekushongedza, nzvimbo dzekuveza, dzimba dzekuratidzira, vatengesi vema calligraphers uye epurasitiki artists. Naizvozvo, Sharjah inokwezva yakawanda yevaongorori, vanofarira art, uye tsika.
Sharjah anozivikanwa nebasa rake semutungamiriri anotungamira wechokwadi tsika dzetsika uye hunyanzvi hwakavimbika. Iyo inozivikanwa zvakare nekukwanisa kwayo kuvaka zita retsika iro rinowirirana midzi yechiIslam ichibatana neyemazuva ano nguva ichimbundikira tsika zhinji dzevanhu.